ညီနောင်မဟာမိတ်(၃)ဖွဲ့၏ တစ်ဖက်သတ်အပစ်အခတ်ရပ်စဲခြင်းအား “ဆဋ္ဌမ” အကြိမ်အားဖြင့် သုံးလတာ ထပ်မံတိုးမြှင့်ပြီး မြန်မာ့တပ်မတော်အား နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရန် ကမ်းလှမ်းသည့်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ (၁) ရက်
ညီနောင်မဟာမိတ် (၃) ဖွဲ့ဖြစ်ကြသော ကိုးကန့် (MNTJP/MNDAA)၊ တအာင်း (PSLF/TNLA)၊ ရခိုင် (ULA/AA) တို့သည်-
(၁)	နိုင်ငံရေးအရ အရေးပေါ်ဖြစ်နေသောပြဿနာများကို နိုင်ငံရေးအရတွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာရန်
(၂)	မြန်မာအစိုးရ၊ မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းများအကြားတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေရန်၊ လက်တွေ့ကျသောလုပ်ငန်းများကို ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်
(၃)	ပြည်သူလူထု၏မျက်နှာကိုထောက်ရှု၍ တိုက်ပွဲများ လုံးဝမဖြစ်ပွားစေဘဲ ပြည်သူ့အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်များကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန်
(၄)	နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးကို အမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် နှင့် ပြည်တွင်းစစ်မီး လုံးဝ ချုပ်ငြိမ်းသွားစေရန်
(၅)	Covid-19 ကူးစက်ရောဂါကို ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးရေး၊ ထိန်းချုပ်နိုင်ရေး၊ တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်
(၆)	ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ်ထိစပ်လျက်ရှိသော အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအားလုံး၏ နယ်စပ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ရရှိစေရန်အတွက် တစ်ဖက်သတ်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအား အကြိမ်ကြိမ် ကြေညာခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှစ၍ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလကုန်အထိ (၅) ကြိမ်တိုင်တိုင် သက်တမ်းတိုးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့တပ်မတော်သည်လည်း မိမိတို့နည်းတူ တစ်ဖက်သတ်အပစ်အခတ်ရပ်စဲခြင်းအား အကြိမ်ကြိမ် ကြေညာနေသော်လည်း နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများမှာ မရပ်တန့်နိုင်ဘဲ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါသည်။ ဤသည်မှာ မြန်မာ့တပ်မတော်ဖက်မှ ရခိုင်ဒေသတစ်ခုတည်းကို သီးသန့်ချန်လှပ်ပြီး ရက္ခိုင့်တပ်တော် တစ်ဖွဲ့တည်းအား ကြည်း၊ ရေ၊ လေ ပူးပေါင်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရန်၊ အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရန် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေသောကြောင့် ရခိုင်ဒေသအတွင်း၌ ယခုကဲ့သို့ တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကြိုတင်ကန့်သတ်ချက်များ၊ တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့အားချန်လှပ်ထားမှုများပါရှိသော မြန်မာ့တပ်မတော်၏ တစ်ဖက်သတ် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကြေညာချက်များနှင့် သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမှ သတင်းမီဒီယာများ၌ ပြောဆိုနေ ခြင်းများမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ရှေ့ဆက်ရန် အဟန့်အတားဖြစ်နေပါသည်။ သို့သော်လည်း ဤသည်ကို နည်းလမ်းရှာပြီးဖြေရှင်းရန် မိမိတို့ဘက်မှ စိတ်ဆန္ဒအပြည့်အဝရှိပါသည်။
မြန်မာ့တပ်မတော်၏ မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းများအပေါ် ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေမှုများမှာ ရပ်တန့်ခြင်း မရှိသေးသည့်အပြင် လူမျိုးရေးအမုန်းတရားများကိုအခြေခံ၍ အရပ်သားပြည်သူလူထုများအား ဦးတည်တိုက်ခိုက်မှု မျိုးကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ထို့အတူ ယခင်ထက်ကြီးမားသော ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများကို ဆက်လက်ပြုလုပ်နေသောကြောင့် တိုက်ပွဲများမှာ ယနေ့အချိန်အထိ ဆက်လက်ပြင်းထန်လျက်ရှိပါသည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်သည် မိမိတို့ပြည်သူလူထုများအား မတရားဖမ်းဆီးခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ မိမိတို့ရပ်ရွာများအတွင်းသို့ လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်၊ လေကြောင်း၊ ရေတပ်သင်္ဘောများမှ နေ့ညအချိန်မရွေး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေခြင်းတို့အပြင် ရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းများကို လူမျိုးရေးအမုန်းတရား များဖြင့် တောက်လျှာက်လုပ်ဆောင်နေခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် လက်တွေ့ကျသည့်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများ စတင်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် မိမိတို့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တစ်ပြိုင်နက်တည်း အပစ်ရပ်စဲရေးအား အတူတကွပူးတွဲကြေညာရန် မိမိတို့ဖက်မှ စိတ်ရင်းစေတနာအမှန်ဖြင့် ကမ်းလှမ်းလိုက်ပါသည်။ ထို့အတူ လက်တွေ့ကျသောလုပ်ငန်းများကို ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အလို့ငှာ တစ်ဖက်သတ်အပစ်အခတ် ရပ်ဆိုင်းခြင်းအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ (၁) ရက်နေ့မှ ဩဂုတ်လ (၃၁) ရက်နေ့အထိ “သုံးလတာ” အချိန်ကာလအား “ဆဋ္ဌမ” အကြိမ် ထပ်မံသက်တမ်းတိုးမြှင့်လိုက်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ကမ်းလှမ်းထားစဉ်အတွင်း မြန်မာ့တပ်မတော်မှ မည်သည့်တစ်စုံတစ်ရာတုံ့ပြန်မှုမရှိဘဲ ယခင်နည်းတူ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများကို ဆက်လက်ပြုလုပ်နေမည်ဆိုပါက မိမိတို့အနေဖြင့် အဖိနှိပ်ခံပြည်သူလူထုများနှင့် လက်တွဲပြီး “ယခင်နည်းတူ” မိမိကိုယ်မိမိ ခုခံသောအနေဖြင့် တုံ့ပြန်ကာကွယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မိမိတို့ ညီနောင်မဟာမိတ် (၃) ဖွဲ့၏ သဘောထားကို ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်။
ညီနောင်မဟာမိတ် (၃) ဖွဲ့
(1)	To resolve serious political problems through political dialogue,
(2)	To effectively carry out practical tasks in conformity with the peace process between our organizations and the government of Myanmar and its military,
(3)	To protect life and property of the general public for the sake of the majority of people occurring without any fighting,
(4)	To actually implement bilateral ceasefire agreements and to end civil war completely,
(5)	To assist the preventive and combative measures in the fight against the COVID-19 pandemic, and
(6)	To promote peace in Myanmar and stability of the borders of neighbouring countries bordering with Myanmar. We have already extended our unilateral ceasefire for five terms from 2019 till May 2020.
Despite the fact that Myanmar Army has also declaredaunilateral ceasefire for several times like us, clashes continue to have broken out. That the Myanmar Army has excluded the Arakan region and attempted to defeat the Arakan Army by launching their sea-land-air offensive attacks in Arakan, the unilateral ceasefires have not stopped the fighting.
The unilateral ceasefires of the Myanmar Army with the preconditions and exclusion of one of our member organizations and irresponsible sayings of the President Office’s spokesman on media have hindered the progress of peace process. Nevertheless, we are fully willing to solve it by seeking the best way.
The Myanmar Army has not halted their military aggression against our organizations but ramped up their intensified assaults targeting civilians based on racial hatred. In addition, the fighting is intensifying to date because the Myanmar Army has continued to conduct more all-out offensive attacks than previous assaults. Meanwhile, the Myanmar Army has continued to carry out burning down of entire village based on racial hatred in addition to committing arbitrary arrest, torture and killings of our civilians and attacking villages with artillery and light weapons from air and navy ships through day and night.
Asagesture of goodwill, we are therefore offering to announce jointlyabilateral ceasefire with Myanmar Army and our organizations at the same time from both sides in order to start pragmatic peace building process. In addition, we have extendedathree-month-long unilateral ceasefire asasixth term from June 1, 2020 till August 31, 2020 in order to effectively implement practical tasks. If the Myanmar Army has continued their offensive attacks like before without any response during the offering time of our unilateral ceasefire extension, we will take decisive defensive actions like before hand in hand with the oppressed peoples.
၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ၊ ဇှနျလ (၁) ရကျ
ညီနောငျမဟာမိတျ (၃) ဖှဲ့ဖွဈကွသော ကိုးကနျ့ (MNTJP/MNDAA)၊ တအာငျး (PSLF/TNLA)၊ ရခိုငျ (ULA/AA) တို့သညျ-
(၁)	နိုငျငံရေးအရ အရေးပျေါဖွဈနသေောပွဿနာမြားကို နိုငျငံရေးအရတှဆေုံ့ဆှေးနှေးအဖွရှောရနျ
(၂)	မွနျမာအစိုးရ၊ မွနျမာ့တပျမတျောနှငျ့ မိမိတို့အဖှဲ့အစညျးမြားအကွားတှငျ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျ အဆငျပွေ ခြောမှစေ့ရေနျ၊ လကျတှကေ့သြောလုပျငနျးမြားကို ထိထိရောကျရောကျ ဆောငျရှကျနိုငျရနျ
(၃)	ပွညျသူလူထု၏မကျြနှာကိုထောကျရှု၍ တိုကျပှဲမြား လုံးဝမဖွဈပှားစဘေဲ ပွညျသူ့အသကျ၊ အိုးအိမျ၊ စညျးစိမျမြားကို အကာအကှယျပေးနိုငျရနျ
(၄)	နှဈဦးနှဈဖကျ ပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေးကို အမှနျတကယျဆောငျရှကျနိုငျရနျ နှငျ့ ပွညျတှငျးစဈမီး လုံးဝ ခြုပျငွိမျးသှားစရေနျ
(၅)	Covid-19 ကူးစကျရောဂါကို ကွိုတငျကာကှယျတားဆီးရေး၊ ထိနျးခြုပျနိုငျရေး၊ တိုကျဖကျြရေးဆိုငျရာ လုပျငနျးမြားကို အထောကျအကူပွုနိုငျရနျ
(၆)	ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေး၊ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ နယျနိမိတျထိစပျလကျြရှိသော အိမျနီးခငျြးနိုငျငံမြားအားလုံး၏ နယျစပျတညျငွိမျအေးခမျြးမှု ရရှိစရေနျအတှကျ တဈဖကျသတျအပဈအခတျရပျစဲရေးအား အကွိမျကွိမျ ကွညောခဲ့ပါသညျ။ ၂၀၁၉ ခုနှဈမှစ၍ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ၊ မလေကုနျအထိ (၅) ကွိမျတိုငျတိုငျ သကျတမျးတိုးခဲ့ပွီး ဖွဈသညျ။
မွနျမာ့တပျမတျောသညျလညျး မိမိတို့နညျးတူ တဈဖကျသတျအပဈအခတျရပျစဲခွငျးအား အကွိမျကွိမျ ကွညောနသေျောလညျး နှဈဖကျတိုကျပှဲမြားမှာ မရပျတနျ့နိုငျဘဲ ဆကျလကျဖွဈပှားနပေါသညျ။ ဤသညျမှာ မွနျမာ့တပျမတျောဖကျမှ ရခိုငျဒသေတဈခုတညျးကို သီးသနျ့ခနျြလှပျပွီး ရက်ခိုငျ့တပျတျော တဈဖှဲ့တညျးအား ကွညျး၊ ရေ၊ လေ ပူးပေါငျးထိုးစဈဆငျတိုကျခိုကျရနျ၊ အမွဈပွတျခမြှေုနျးရနျ ကွိုးစားလုပျဆောငျနသေောကွောငျ့ ရခိုငျဒသေအတှငျး၌ ယခုကဲ့သို့ တိုကျပှဲမြားဆကျလကျဖွဈပှားနရေခွငျး ဖွဈပါသညျ။
ကွိုတငျကနျ့သတျခကျြမြား၊ တဈဖှဲ့ဖှဲ့အားခနျြလှပျထားမှုမြားပါရှိသော မွနျမာ့တပျမတျော၏ တဈဖကျသတျ အပဈအခတျရပျစဲရေးကွညောခကျြမြားနှငျ့ သမ်မတရုံးပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူမှ သတငျးမီဒီယာမြား၌ ပွောဆိုနေ ခွငျးမြားမှာ ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျရှဆေ့ကျရနျ အဟနျ့အတားဖွဈနပေါသညျ။ သို့သျောလညျး ဤသညျကို နညျးလမျးရှာပွီးဖွရှေငျးရနျ မိမိတို့ဘကျမှ စိတျဆန်ဒအပွညျ့အဝရှိပါသညျ။
မွနျမာ့တပျမတျော၏ မိမိတို့အဖှဲ့အစညျးမြားအပျေါ ထိုးစဈဆငျတိုကျခိုကျနမှေုမြားမှာ ရပျတနျ့ခွငျး မရှိသေးသညျ့အပွငျ လူမြိုးရေးအမုနျးတရားမြားကိုအခွခေံ၍ အရပျသားပွညျသူလူထုမြားအား ဦးတညျတိုကျခိုကျမှု မြိုးကို ပိုမိုလုပျဆောငျလကျြရှိသညျ။ ထို့အတူ ယခငျထကျကွီးမားသော ထိုးစဈဆငျတိုကျခိုကျမှုမြားကို ဆကျလကျပွုလုပျနသေောကွောငျ့ တိုကျပှဲမြားမှာ ယနအေ့ခြိနျအထိ ဆကျလကျပွငျးထနျလကျြရှိပါသညျ။ တဈပွိုငျနကျတညျးတှငျ မွနျမာ့တပျမတျောသညျ မိမိတို့ပွညျသူလူထုမြားအား မတရားဖမျးဆီးခွငျး၊ နှိပျစကျခွငျး၊ သတျဖွတျခွငျး၊ မိမိတို့ရပျရှာမြားအတှငျးသို့ လကျနကျကွီး၊ လကျနကျငယျ၊ လကွေောငျး၊ ရတေပျသင်ျဘောမြားမှ နညေ့အခြိနျမရှေး ပဈခတျတိုကျခိုကျနခွေငျးတို့အပွငျ ရှာလုံးကြှတျမီးရှို့ဖကျြဆီးခွငျးမြားကို လူမြိုးရေးအမုနျးတရား မြားဖွငျ့ တောကျလြှာကျလုပျဆောငျနခေဲ့သညျ။
ထို့ကွောငျ့ လကျတှကေ့သြညျ့ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးမြား စတငျနိုငျရနျအတှကျ မွနျမာ့တပျမတျောနှငျ့ မိမိတို့ နှဈဦးနှဈဖကျ တဈပွိုငျနကျတညျး အပဈရပျစဲရေးအား အတူတကှပူးတှဲကွညောရနျ မိမိတို့ဖကျမှ စိတျရငျးစတေနာအမှနျဖွငျ့ ကမျးလှမျးလိုကျပါသညျ။ ထို့အတူ လကျတှကေ့သြောလုပျငနျးမြားကို ထိရောကျစှာဆောငျရှကျနိုငျရနျအလို့ငှာ တဈဖကျသတျအပဈအခတျ ရပျဆိုငျးခွငျးအား ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ၊ ဇှနျလ (၁) ရကျနမှေ့ ဩဂုတျလ (၃၁) ရကျနအေ့ထိ “သုံးလတာ” အခြိနျကာလအား “ဆဋ်ဌမ” အကွိမျ ထပျမံသကျတမျးတိုးမွှငျ့လိုကျပါသညျ။ ဤကဲ့သို့ ကမျးလှမျးထားစဉျအတှငျး မွနျမာ့တပျမတျောမှ မညျသညျ့တဈစုံတဈရာတုံ့ပွနျမှုမရှိဘဲ ယခငျနညျးတူ ထိုးစဈဆငျတိုကျခိုကျမှုမြားကို ဆကျလကျပွုလုပျနမေညျဆိုပါက မိမိတို့အနဖွေငျ့ အဖိနှိပျခံပွညျသူလူထုမြားနှငျ့ လကျတှဲပွီး “ယခငျနညျးတူ” မိမိကိုယျမိမိ ခုခံသောအနဖွေငျ့ တုံ့ပွနျကာကှယျသှားမညျဖွဈကွောငျး မိမိတို့ ညီနောငျမဟာမိတျ (၃) ဖှဲ့၏ သဘောထားကို ထုတျပွနျကွညောအပျပါသညျ။